Roulette Paradox: ku dabaqida Parrondo ka soo horjeedka roulette
Hadaad xiisaynayso inaad waxbadan barato Kala duwanaanshaha Parrondo, waa inaad ogaataa in Diisambar 23, 1999 joornaalka caanka ah ee Ingriiska ee Nature, uu daabacay maqaal ay aad u xiiseynayeen aqoonyahannada cilmiga bayoolajiga, xisaabyahannada, aqoonyahannada iyo aqoonyahannada tirakoobka adduunka oo idil.
Qoraagu waa Injineer reer Australia ah, Derek Abbott, oo sawiray waxa loogu yeero Parrondo paradox.
Professor-ka. Juan Manuel Rodriguez Parrondo waa fiisikiste ka tirsan Jaamacadda Madrid, kaasoo muujiyey sida aan xisaab ahaan ugu guuleysan karno innagoo ka qeyb qaadaneyna laba ciyaarood oo khamaar aan caddaalad ahayn (mid kasta oo ka mid ah suurtagalnimadu na dhigeyso qasaaro).
Fiisigiska Isbaanishka ah wuxuu qorsheeyey aragtidan aragtiyadiisa ah tartamada lagu tartamayo si loo muujiyo hababka cilmi baaristiisa ee ku saabsan qaadista borotiinnada ku jira unugyada, waxyaabo gaar ah oo ka mid ah dhaqdhaqaaqa Brownian ee maaddooyinka dareeraha ama gaaska iyo dhibaatooyinka qaarkood ee kuleylka.
Kala duwanaanshaha Parrondo wuxuu qeexayaa laba ciyaarood oo khamaar ah oo ku saleysan tuurista laba qadaadiic.
Madax ama dabo, haddii lacagta qadaadiicda ah aan lagu shubin (yacni haddii cayaartu caddaalad tahay), ixtimaalka guushu waa 50%.
Ciyaarta Parrondo A, lacagta (oo aan ugu yeeri doonno lacagta X) ma'aha mid isku dheelitiran: celcelis ahaan waxay ka soo baxdaa madax 495 jeer 1.000kiiba.
Markaa ciyaarida A, dhab ahaan waan lumineynaa mustaqbalka fog. Ciyaarta B waxaan wali ku sharadeynaa madaxyada, laakiin waxaan u isticmaalnaa 2 qadaadiic (oo aan ugu magac darin magacyada Y iyo Z).
Coin Z waa mid aad u liidata: kaliya waxay siisaa madax 50 jeer 1.000kiiba (hal mar 20kiiba); Qadaadiic Y beddelkeeda ayaa noo roon, oo soo saarta madaxyo 700 jeer 1.000kiiba.
Sharci kale oo ka mid ah ciyaarta B waa in aan isticmaalno lacagta Z oo keliya haddii aan ku haysanno tiro qadaadiic ah jeebkeena si sax ah oo loo qaybin karo 3. Haddii lambarkan aan loo qaybin karin 3, waxaan had iyo jeer isticmaalnaa lacagta Y oo keliya.
Waqtiga dheer, ciyaarta B sidoo kale wey lumisaa, runtiina suuragalnimada guushu waa 1/3 (boqolkiiba inta jeer ee aan isticmaalno qadaadiic Z) ayaa lagu dhuftay 0,05 (yacni labaatanaad) taas oo siinaysa 0,01666 ... oo lagu daray 2/3 oo lagu dhuftay 0,7 taas oo u dhiganta 0,46666.
Wadarta labada itimaal waa 2 ama: in ka yar 0,48333%.
Waxaan ku soo gabagabeyneynaa inaanan dooneynin inaan ciyaarno labada ciyaar A ama B.
Banaanbaxa Parrondo waa mid layaableh, maxaa yeelay hadii aan ciyaarno ciyaar A laba jeer ah iyo ciyaar B laba jeer oo aan sidan ku sii socono, ama aan si kadis ah u doorano mararka qaarkood A iyo marna B, halkii aan ka adkaan lahayn, waan guuleysaneynaa. Inbadan oo aan ciyaarno, ayaa inbadan guuleysano!
Prof. Parrondo wuxuu muujiyey gabagabadaas isagoo adeegsanaya sabab xisaabeed heer sare ah oo aan ahayn kiiska hadda la soo sheego
Waxa kale oo uu soosaaray qaybo kala duwan oo ah 50.000 oo riwaayadood kombiyuutarka ah, isagoo xaqiijinaya natiijadan layaabka leh, oo umuuqata inay iska horimaanayso caqligeena
Xaaladda labada ciyaarood ee nasiibka ah ee ay ku sharraxday 'Parrondo's paradox' ayaa si rasmi ah isugu mid ah tan harpoon oo lagu rogrogo shaag giraangirta, oo ay u dhaqaaqdo maaddooliyeyaasha gaaska ku dhaca si aan kala sooc lahayn.
Harpoon waa giraangiraha ilkaha oo leh ilko u janjeedha sida kuwa miinshaarta oo kale, oo u rogi kara labada jiho midkood, taas oo ah, uma jeedin dhinaca ka soo horjeedka, maxaa yeelay waxaa jira harpoon ku dheggan godka u dhexeeya labada ilig iyo baloogyada giraangirta (waa curiyaha 'a' ee sawirka hoose).
Jihada loo oggol yahay, si kastaba ha noqotee, harpoonku wuxuu ku dul wareegayaa dusha sare ee ilkaha mana hor istaagayo wareegga.
Fikrad ahaan qaab-dhismeedka noocan ahi wuxuu tamar ka qaadan karaa molikuyuullada gaaska ee si aan kala sooc lahayn ugu socda jihada saxda ah isla markaana aan dareen u lahayn kuwa tagaya jihada ka soo horjeedda.
Jaleecada hore waxaad moodaa inay aaladani awood u leedahay inay jabiso Mabda'a Labaad ee Thermodynamics, maxaa yeelay waxay kaheli doontaa tamar gaas heer kulka oo keliya ah, iyadoon laga faa'iideysan ka boodka kuleylka iyo qabowga.
Dabcan tani maahan kiiska, macquul maahan in lagu xad gudbo Mabda'a Labaad ee Thermodynamics iyo sababaha xariifnimada ah ee Parrondo, oo u dhashay si uu u sharaxo farsamooyinka isku dhafan ee dabeecadda, wuxuu un waxtar u yeelan doonaa kuwa runtii sameeya dadaalka si loo fahmo.
Sanado badan ayaa ka soo wareegay tan iyo markii aragtidan xiisaha badan la soo bandhigay markii ugu horaysay, iyada oo kicinaysa xiisaha dunida tacliinta iyo dhamaan bulshada cilmiga leh.
Sanadihii la soo dhaafay waxaa jiray isku dayo aan la tirin karin oo lagu dalbanayay miiska cagaaran, laakiin ugu yaraan in aan ogahay in aan cidina ilaa hadda ku guuleysan.
Sababtoo ah isbarbar yaacaya ayaa guuleysanaya
Falanqaynta abuurista aaladda 'Parrondo paradox', waxaan awooday inaan ogaado inay ku guuleysatay maadada 'ABBAB matrix' ee ficil ahaan 'kala badinaysa' inta jeer ee ciyaarta shilinka Z (midka soo baxa 50 jeer 1.000) kaliya ku filan si loo hubiyo in lacagta ugu fiican (qadaadiicda Y + 70%) waxay ku guuleysan kartaa qaddar ka weyn wadarta khasaaraha qadaadiicda X (badinta soo noqnoqoshada 49,5%) iyo Z (5%).
Ficil ahaan, kaliya ciyaarta B ee isbarbardhiga Parrondo, lacagta Z waxaa la ciyaaraa kaliya marka lacagta loo qeybiyo 3, sidaas darteed waxaa loo adeegsadaa 1/3 waqtiga, ama qiyaastii 33,33%.
Si kastaba ha noqotee, adoo ku daraya ciyaarta A macnaha guud, haddii qorshaha la raacayo ee lagu dooranayo lacagta la adeegsanayo (taas oo hada laga bilaabo aan ugu yeeri doono 'matrix') had iyo jeer waa ABBAB, tan waxaa la ciyaari doonaa 40% waqtiga (waxaa jira 2 Shuruudaha A ka mid ah 5 ee shaxda), sidaas darteed lacagta Z ee ka socota 33,33% inta jeer ee ciyaarta B kaligeed, waxay hoos ugu dhaceysaa 1/3 inta soo hartay 60%, ama 20% ciyaarta adduunka, taas oo kaliya ku filan in loo oggolaado lacag Y (+ 70%) si looga guuleysto qasaarooyinka ay keeneen labada qadaadiic ee kale.
Asal ahaan, Ciyaarta A, in kasta oo lafteeda ay faa'iido darro tahay, waxay u dhaqantaa dhibaato (buuq) oo ku saabsan qaybta ugu liidata (lacagta Z) ee ciyaarta B.
Sababtoo ah isbarbar yaacintu ma guuleysaneyso
Dhibaatada muuqata ee aan laga gudbi karin ee roulette ayaa ah inaysan jirin lacag (sharad) oo leh 70% suuragalnimada sortie iyo in, haddii ay dhacdo guul / lumis, kaliya lagu tiriyo 1 halbeeg sida lacagta dhabta ah ay sameyso.
Sidoo kale waa run oo haddii lacagtani ay u jiri lahayd roulette, way ku filnaan lahayd in si toos ah loogu ciyaaro oo, sida aad qiyaasi karto, dhammaan qoraalladaydan wax macno ah ma samaynayso.
Nidaamka asalka ah ee ka soo horjeedka, si kastaba ha noqotee, waxaa si waadix ah loo muujiyey in lagu guuleysto, taasi waa, waa suurtagalnimada isku xirnaanta sida, iyadoo loo maleynayo in lacagta Y ee runti ay jirto, xisaab ahaan ayaa ka sarreysa faa'iidada guriga.
Hadafkeenu sidaas darteed, haddii aan dooneyno inaan isku dayno inaan ku dabaqno roulette, waa inaan noqonaa inaan ku soo saarno hab 'aamin' ah, ugana tagno hawsha dib u soo kabashada kharashka agabkeenna si dib loogu abuuro lacagta Y ((70%)) .
Kahor intaanan u dhaqaaqin abuurista alaabada, si kastaba ha noqotee, waa inaan dhisnaa wax aad muhiim u ah, taas oo ah inaan fahano inta nidaamkeenu ku guuleysto boqolley ahaan, si loo barto waxa ka soo baxa ay tahay, xaqiiqo noo adeegi doonta si loo go'aamiyo a aasaasiga ah ee ciyaarta, ama ...
Fahamka weyn ayaa ah: Stopwin
Dhinaca ciyaarta marwalba waxaa la aaminsanaa in Stopwin uusan waxtar lahayn, maadaama, haddii nidaam guuleysto, marwalba wuu guuleystaa, sidaa darteed Stopwin ma laha wax caqli ah oo aan ka aheyn in ciyaarta la soo gaabiyo si aan loo baahneyn isla markaana isla sidaas ayaa lagu dhaqmayaa haddii nidaamka laga adkaado. Stopwin-ka, sidaan u fahmay, waa aasaas.
Laga bilaabo hubaal ahaan in xilligan aysan weli jirin nidaam xisaab ahaan ku guuleysta roulette, Stopwin wuxuu noqdaa mid go'aan qaadanaya marka loo isticmaalo wacyigelinta.
Waxaan badanaa ka aqriyaa fagaarayaasha kaladuwan ee khadka tooska ah ee internetka, qoraalada ay qoraan ciyaartoydu inay yiraahdaan waxay adeegsadaan a Stopwin oo ah 3/4/5/10 cutubkiiba kalfadhi kasta hababkooda, laakiin aniga oo aan waligey cadeyn sababta ay u doorteen tiradaas unugyada ah
Waxaa laga yaabaa inaan u maleyno inaan ku guuleysaneyno 5 cutub maalintii 10 euro, dhamaadka bisha waxay sameeyaan 1.500 euro, ficil ahaan mushahar dheeri ah, laakiin kiiskan waxaan ku raacsanahay inta badan ciyaartoyda, Stopwin ayaa maya dareen, ugu yaraan illaa iyo inta ay weli tahay tiro ka mid ah shakhsiyaadka shakhsiga ah.
Stopwin-ka, si loo helo waxtar la taaban karo, waa in marka hore la tirakoobo tanna waxaa lagu sameyn karaa oo keliya iyadoo la xaqiijiyo kala horeynta waxa ka soo baxa habka aan ku dabaqi doonno miiska cagaaran.
tusaale: haddii aan go'aansaday inaan u dhigo ciyaarteyda qaab ay soo saarto 10% celcelis ahaan waxaanan go'aansaday inaan ciyaaro 100 tallaal kalfadhi kasta, ka dib markii aan ciyaaray 70 kaliya, waxaan horeyba u haystay 10ka cutub gacanta, sidoo kale, nasiib wanaag , Waxaan ururiyey 3 qaybood oo aanan aniga sabab u ahayn, maxaa yeelay nidaamkayga, oo leh celcelis ahaan wax soo saar la filayo oo ah 10%, 70kii istaroog ee la ciyaaray waxay iga dhigtay inaan ku guuleysto 7 oo keliya oo aan 10 ahayn.
Markii aan gaadhay hadafkaygii (10 cutub oo 100 tallaal ah) oo 30 tallaal ah ka hor, waan joojinayaa, waxaan codsanayaa Stopwin, iyada oo la siinayo dhalidda ciyaarta aan codsanaayo, 30-ka hartay ee hartay waxaan u badan tahay inaan ku sii jiro warqadda cod-bixinta ama ka sii darran luminta, aniga oo naftayda u soo bandhigaya cashuurta aniga oo aan haysan sabab macquul ah.
Sabab kale oo run ah oo sax ah oo loo adeegsado Stopwin waxay kuxirantahay wixii aan si xoog leh u muujiyay dhowr sano ka hor iyada oo loo marayo jilitaanka PC, halkaas oo aan ku hubsaday Marigny De Grilleau wuu qaldamay, Sababta Joogitaan shaqsiyadeed ma jirto ama ka sii fiican:
in roulette, duugga waxaa lagu falanqeeyaa oo keliya tixraaca matoorka soo saaray iyaga taxane aan kala go 'lahayn oo wareeg ah.
Sidaa darteed, haddii roulette-ka kor ku xusan uu iga dhigay inaan ku guuleysto wax ka badan teori ahaan, waxaan codsanayaa Stopwin tanina macnaheedu maahan inaanan sii dheereyn maalintaas, laakiin maalintaas mar dambe ma ciyaarayo roulette-kaas.
Faa'iido la'aanta Stopwin ayaa ah beenta ugu weyn ee ciyaartoygu naftiisa u sheego inuu iska ilaaliyo inuu joojiyo ciyaarta, waa hadiyad dheeri ah oo aan siinno ganacsadaha, maxaa yeelay haddii giraangiradu ay naga heshay, adigoon istaagin waxaan u oggolaaneynaa inay soo ceshato qashinka ( farqiga) inuu isagu soo saaray manfacayaga.
Roulette Paradox Qabille
Si loo xaqiijiyo waxa soo saarista (roi%) ee asalka ah 'Parrondo paradox', waxaan abuuray jilid si sax ah u tarmaya abuurista 3-da shilimaad waana mahadsanid taas oo aan awood u yeeshay inaan falanqeeyo isku xigxiga dhacdooyinka asalka u ah firfircoonida aragtidan, iyo sidoo kale iska hubi sidoo kale iskuday noocyo kale oo had iyo jeer ku guuleysta, iyada oo ay ugu wacan tahay iskudhafyada kaladuwan ee suurtogalka ah (matrixka) ciyaaraha A iyo B.
In Paradox Simulator, marka lagu daro jaantuska ciyaarta, sidoo kale waa suurtagal in la kala duwanaado boqolleyda saddexda qadaadiic, sidaa darteed, iyada oo aan loo eegin matrixka go'an ee ABBAB, waxaa kale oo suurtagal ah in la isku dayo in la beddelo boqolleyda lacagta asalka ah, iyadoo boqolkiiba la mid ah kuwa sharadka lagu samayn karo miiska roulette.
Kahor intaadan sidan, si kastaba ha noqotee, si loo go'aamiyo roi% ee ka soo horjeedka Parrondo, waa inaan si hubaal ah u aqoonsanno waxa noqon doona sedexdeenna shillin, taas oo si fudud loogu sii wadi doono inaan ugu yeerno X, Y, iyo Z.
Laga bilaabo boqolkiiba sortie ee 3 qadaadiic ah ee loo isticmaalay 'Parrondo paradox', aan hada isku dayno inaan fahano waxa Roulette na soo bandhigi karto.
Xisaabinta boqolleyda lagu galayo Qabille waa mid aad u fudud: kaliya u qeybi fursadda aan dooneyno inaan tixgelinno 37; tusaale ahaan, fursad fudud waxay ka kooban tahay 18 lambar, marka 18/37 = 0,4865 marka barnaamijka waxaan ku gelineynaa qiimaha 486.
Sidaan horayba u iri, lacagta X ee ku jirta is-diidmada waxay ku guuleysaneysaa 49,5% waqtiga annaga si fudud ayey u noqon kartaa fursad fudud, oo guuleysata 48,65% waqtiga (looma baahna in loo qeybiyo boqolleyda jajab tobanle).
Lacagtani ugu horreysa runtii waa qumman tahay, maxaa yeelay dhab ahaantii waxay kaliya guuleysaa ama lumisaa hal cutub, sida lacagta dhabta ah.
Coin Y, oo si caqligal ah u guuleysata 70% waqtiga ayaa ah 'awooddeenna wadista', waa kan dhaliya macaashka, waana nasiib darro, iyadoo aan isla markiiba la helin, waa inaan dib ugu laabannaa farshaxan.
Xusuusnow in si loo soo saaro waa inaan isku dayno, intii suurtagal ah, si aan u ekeysiino xaaladda lacagta dhabta ah; waad ku raaxeysan kartaa sidaad u aragto inay ku habboon tahay, tijaabadayda waxaan u qaatay tixraac 2 erey oo martingale ah, maaddaama tani ay ku guuleysaneyso 1 unug oo leh tiro ahaan tirakoob ah 73,63% iyo markaan ku guuleysto waxaan helayaa 1 cutub (waa hagaagsan yahay!), Laakiin markii aan nasiib darro lumiyo , Waxaan luminayaa 3 cutub halkii aan ka ahaan lahaa hal (aafo!).
Cutubyadan lumay ayaa sidaas darteed noqon doona shayga isku dayga soo kabashadayaga, hawl loo igmaday lacagta Z (waan arki doonaa waqti yar sida).
Lacagta 'Z', taas oo isbarbaryaacaya ay leedahay soo noqnoqoshada 5%, ayaa si aad u wanaagsan lagu soo saari karaa iyada oo lagu sharraxayo faras (kala qeybsan), taas oo wareeg kasta oo uu leeyahay suurtagalnimada sortie of 5,41%, gabi ahaanba la jaan qaada boqolleyda is-diidmada laakiin tan markay qadaadiicdu guuleysato, si ka duwan tan isbarbar yaaca, kuma guuleysato kaliya 1 halbeeg, laakiin waxay ku guuleysataa inta badan 17 (heer sare!).
Aan yara dul istaagno intaanan sii wadin; hadda waxaan ogaanay saamiga saxda ah ee saddexda lacageed ee cusub oo ah:
Coin X - 48,65% - Fursad fudud;
Qadaadiic Y - 73,63% - 2-jeer martingale;
Coin Z - 5,41% - faras (kala qaybsan)
Waqtigan xaadirka ah waxaan haysannaa dhammaan walxaha si aan u dhisno, waxaan ugu mahadcelinayaa Qabyaaladda 'Paradox Simulator', intee in le'eg ayaa 3 qadaadiic ah ayaa guuleysan doonta haddii qadaadiic Y ay lumiso kaliya hal unug halkii ay ka ahaan lahayd 1 iyo haddii lacagta Z ay ku guuleysato hal cutub oo keliya halkii ay ka ahaan lahayd 3.
Go'aami dhalidda (roi%)
Haddii aan galo saddexda boqolleyda jilitaanka, taasi waa 486 lacagta qadaadiicda ah 'X', 736 ee Y 'iyo 54' ee 'Z' oo aan ku dhaqaaqo hal milyan oo jilitaan ah, waxay keenaysaa in nidaamkani uu leeyahay roi% qiyaastii ah 3,5%.
Waqtigan xaadirka ah, markaan aqoonsaday 3da qadaadiic, waa inaan is abaabulaa si aan u maareeyo sharadka si aan isugu dayo inaan u soo ceshado 2-da cutub ee qadaadiicda Y lumiso in ka badan lacagta dhabta ah, sida haddii aan ku guuleysto howshan, dhexdhexaadka / mustaqbalka fog waxaan kaliya oo aan hubin karaa inaan ku guuleysto 3,5% ama qiyaastii 3 iyo badh unug kasta 100kii istaroog oo la ciyaaro, lacag ayaa la bixiyaa dabcan!
Aynu sii wadno: ugu dambayntii waxaan haynaa lacagta 3-da ah waxaanan si sax ah u naqaannaa isku xigxiga (matrixka) si loo dhigo sharadyada:
CIYAARTA A - Qadaadiic X (hal fursad fudud)
CIYAARTA B - Qadaadiicda Y (martingale ee 2 erey oo leh joogsi cutubkii ugu horeeyey ee guuleystey) ama Qadaadiic Z (kala qeybsanaan) kaliya haddii lacagta loo qeybiyo 3
Laga bilaabo tallaalka lixaad wixii ka dambeeya, wuxuu mar kale ka bilaabanayaa tallaalka 1 iyo wixii la mid ah.
Waxaan u ciyaaraa si aan kala sooc lahayn oo aan u guuleystaa!
Sidee loo doortaa fursadaha sharadka? Waxaan go'aansaday inaan u doorto si aan kala sooc lahayn isla markaana waxaan isla markaaba sharxi doonaa sababta.
Xisaabiyeyaasha xisaabaadka qarniyaal badan waxay ku waaninayeen ciyaaryahanka saboolka ah fikradaha sida 'at roulette every stroke is a new stroke' or 'roulette has not memory' well, tan iyo markii aan ku raacsanahay fikraddan, barnaamijka cusub ee aan sameeyay ee lagu maareeyo lacagta iyo khamaarista (wax yar ayaan ka hadli doonaa), waxaan galiyay matoor si aan kala sooc lahayn u soo bandhigaya oo tallaal kasta ii tusaya waxa aan ku sharxi doono iyada oo ku saleysan nooca lacagta aan u ciyaarayo si aan u raaco shaxda ABBAB.
Qeybtaan ka mid ah ciyaar aan kala sooc lahayn feker ahaanteyda ayaa muhiim u ah sida wax kasta oo kale, maxaa yeelay markaan fadhiisto miiska, wax fikrad ah kama haysto qashinka uu roulette gaar ah soo saaray waagii hore.
Xaqiiqdii, haddii, tusaale ahaan, aan go'aansado inaan marwalba ku ciyaaro lacagta 'X' ee casaanka ah iyo roulette-ka maalin ka hor si adag ayaa loo tuuray si casaan leh, waxaan u maleynayaa inaan la kulmi doono dhammaan mawjadaha madow ee madow, halka dhabta saxda ah ay sidoo kale run tahay oo sidaa darteed anigu sidoo kale waan guuleysan karaa, sidaa darteed ma awoodo inaan saadaaliyo sababta tallaal kasta waa toogasho cusub, ka dib waxaan aaminay aayahayga matooriyaha aan kala sooca lahayn ee barnaamijka, si loo helo habka 100% oo ku saleysan boqolkiiba dhacdooyinka mustaqbalka oo aan waligood ku dhicin kuwii hore, taas oo wixii aan ka fahmay ay marwalba u ahayd isha guuldarrada ciyaaryahanka.
Marka, si kooban:
haddii ay tahay inaan ciyaaro lacagta X: Waxaan u ciyaaraa fursad fudud oo aan kala sooc lahayn;
haddii ay tahay inaan ciyaaro lacagta qadaadiicda ah Y: tallaalka ugu horreeya waxaan ku ciyaarayaa 1 cutub oo aan ku helayo fursad fudud oo fudud (haddii aan ku guuleysto joogsiga), haddii aan guuldareysto, waxaan ku ciyaaraa 2 cutub fursad kale oo aan kala sooc lahayn oo aan daruuri u ahayn tan tallaalkii ugu horreeyay, intee in le'eg% guusheennu ma beddeleyso haddii aan beddelno fursadda maxaa yeelay had iyo jeer waxay tilmaamaysaa suurtagalnimada in la qiyaaso 18 lambar oo ka mid ah 37 oo ah laba isku xigxig oo is xiga;
haddii ay tahay inaan ku ciyaaro qadaadiic Z: faras (kala-bax) oo aan kala sooc lahayn dhammaan kuwa laga heli karo sariirta ciyaarta.
Maamul lacagta (lacagta maamulka)
Hadda waxaan u nimid mowduuc runtii muhiim ah: maaraynta diiwaanka lacagta iyo dhaqaajinta dib u soo kabashada.
Waxaan ku xusuusinaynaa, mahadnaqa jilista, waxaan xaqiijinay in haddii qadaadiicda Y aysan lumin 3 qaybood iyo haddii lacagta Z aysan ku guuleysan 17, waxay lahaan doontaa wax soo saar dhan 3,5% (waligeen yaanan ilaawin qiimahan); si kastaba ha noqotee, si aan si daacadnimo leh u adeegsanno qorshaha ka soo horjeedka iyo si loogu oggolaado inay si sax ah u muujiso sharad la sameeyo, waxaan u baahanahay inaan abuurno kiis dummy, oo aan wici doono Kiis aan caadi ahayn.
Sanduuqan waxaa loo isticmaali doonaa in lagu fahmo isbeddelka is-dhiibis la'aanta ah oo noo oggolaaneysa in aan ka fiirsanno tixgelinta lagama maarmaanka ah inta aan ku jirno weerarka.
Laabta 'Paradox', sidaas darteed, waxaa loola xisaabtami doonaa sida saxda ah haddii mid kasta oo garaac / qadaadiic ahi soo saaro +1 ama -1 sidaa darteed marka laga reebo labada qaybood ee dheeraadka ah ee ka lumay lacagta Y, iyo kuwa dheeriga ah ee laga helay lacagta Z.
Lacagtan, haddii loogu xisaabtamo qaabkan, waxay si buuxda u ixtiraamaysaa qorshaha ka soo horjeedka sidaas darteedna waxay ku guuleysan kartaa oo keliya xisaab ahaan muddada fog.
Ta labaad Case waxaan u baahanahay, waa taa bedelkeeda Reale, Halka aan ku xisaabtameyno inta aan jeebka ku heysano marka la barbardhigo wareegyada la ciyaaray (real roi%).
Ugu dambeyntii laakiin ugu yaraan, afhayeenka saddexaad, oo aan wici doono Sanduuqa kabashada iyo taas oo dhammaan unugyada dheeriga ah ee lagu lumiyay shilinka Y iyo kuwa ku guuleystay qadaadiic Z ay isku soo ururi doonaan.
Marka haddii aan ku guuleysto tallaal:
Qadaadiic X: + 1 oo ku qoran Laabta Boqortooyada iyo +1 oo ku taal Laabta Paradox;
Qadaadiic Y (haddii aan ku guuleysto cirridka koowaad ama labaad ee martingale): +1 calaamadda Bangiga Boqortooyada iyo +1 Bangiga Paradox;
Qadaadiic Z: + 17 oo ku jira Laabta Boqortooyada iyo +1 ee Laabta Bahalka ah iyo + 16 ee Laabta Soo Kabashada.
Taas bedelkeeda, haddii aan ku lumiyo:
Qadaadiic X: -1 calaamadda Bangiga Boqortooyada iyo -1 ee Bangiga Paradox;
Qadaadiic Y (haddii aan sidoo kale lumiyo tallaalka labaad ee martingale): saxiix -3 Cassa Reale, -1 Cassa Paradox iyo -2 gudaha Cassa Recovery;
Qadaadiic Z: -1 calaamadda Bangiga Boqortooyada iyo -1 ee Bangiga Paradox.
Maxay ugu jirtaa Soo-kabashada Lacagta haddii aan ku guuleysto qadaadiic Z +16 halkii aan ka heli lahaa + 17?
Waxaan u sameeyaa sababtoo ah hal cutub oo ka mid ah 17-ka guuleystey ayaa had iyo jeer tagaya qadaadiic Z, sida haddii ay tahay qadaadiic dhab ah, 16-ka soo hartay waxay ii yihiin 'dheeri'; Had iyo jeer xusuusnow in Lacag-bixiyaha 'Paradox Cashier' loo baahan yahay in si sax ah loo maareeyo sida haddii ciyaarta lagu fuliyay saddex qadaadiic oo dhab ah, oo kaliya bixiya +1 / -1.
Sidaa darteed, haddii inta lagu guda jiro ciyaarta ay tahay inaan ku ciyaaro lacagta qadaadiicda ah ee Z (kala qaybsan) tan waxaan sameeyaa oo keliya haddii kaashka Lacageed uu yahay mid taban; liddi ku ah, haddii Lacagta Soo-celinta Lacageed ay tahay eber, lacagta Z-da uma baahna inay wax soo kabato, maxaad naftaada ugu ciqaabeysaa sharad 5,41%?
Xaaladdan oo kale waxaan ku ciyaarayaa lacagta ugu fiican ee suurtagalka ah, taas oo ah fursad fudud halkii aan ka ahaan lahaa faras.
Waqtigan xaadirka ah, si kastaba ha noqotee, haddii mar kasta oo lacagta Z-da la ciyaaro, Xaaladda Soo-kabashada waxay ku jirtaa eber oo waxaan ciyaarayaa fursad fudud, waxsoosaarka% ee nidaamku kama badna 3,5%, dhab ahaantii adoo adeegsanaya Qabille oo beddelaya Z qadaarta qiimaha 54 (faras) oo wata 486 (fursad fudud) waxay yeelan doontaa in waxsoosaarka ka imanaya 3,5% uu u kaco ilaa 18%, qiime lagu aqoonsan doono RMP (waxsoosaarka ugu badan ee suurtogalka ah)
Ka daadi hawsha xad-dhaafka ah
Sanduuqa Soo-kabashada sidoo kale waxaa macno ahaan u qaadan kara Bangiga Royal, sidee?
Tusaale ahaan, haddii 10 ka dib ay si gaar ah u socoto (markasta xusuusnow in lacagta Y ay ku socoto 73,65% itimaalka) Bangiga Royalna waxaan ku leeyahay tusaale ahaan 4 cutub, 4-ta cutub waa tiro aad u badan sida Roi% marka loo barbar dhigo wareegyada la ciyaaray ( 40%) iyo tan ugu badan ee aan soo saarnay waxaan xaqiijinay inay tahay 18% (aan dhahno 20% in la soo koobo), waxaan hayaa 2 qaybood oo aan aniga igu kalifayn taas oo markaa aan 'uga dhaqaaqo' xisaabinta Bangiga Royal ilaa Soo Celinta mid, aniga oo ii oggolaanaya hal shay oo runtii muhiim ah: dib u dhig hawlgalka soo kabashada hal xilli faraska, maxaa yeelay marka qadaadiicda Y ay lumiso 3 cutub, labada taga Cassa Recovery waxaa gabi ahaanba la qabsan doona wixii dheeraadka ahaa ee hore, taas oo ii oggolaanaysa inaan mar kale ku ciyaaro lacagta Z oo leh fursad fudud halkii aan ku isticmaali lahaa faras.
Waxaa la mid ah kiiska kaas oo Lacagta Soo-kabashada tusaale ahaan ay tahay -8 oo aan ku guuleysto sharad faraska; oo ka mid ah 17-kii cutub ee ku guuleystey 1 wuxuu aadayaa Sanduuqa Baaragaraafka (qasabka ah) 16-ka soo harayna waxay keenayaan dheelitirka Sanduuqa Soo-celinta laga bilaabo -8 illaa +8, taas oo macnaheedu yahay in 4 wareega lagu lumiyo qadaadiicda Y (xusuusnow in lacagtani soo saareyso -2 cutub kasta oo lumis kasta), Waxaan awoodi doonaa inaan ka fogaado inaan ku bilaabo faraska faraska.
Ugu dambeyntiina, anigoo tixgelinaya Roi-ga ugu yar ee la filayo (3,5%) iyo midka ugu sarreeya ee suurtagalka ah (18%), waxaan aaminsanahay inay habboon tahay in dhammaan xisaabinta la xiriira qoondaynta qaybaha Bangiga Royal iyo midka Soo-kabashada, laakiin ka sarreeya dhammaantood ilaa Stopwin, waa in lagu xisaabiyaa macaashka 10%, marka haddii aan haysto 10% roi oo ku saabsan wareegyada la ciyaaray, Waan joojiyaaStopwin) oo bilaw cashar kale (nadiifinta dhammaan xisaabinta) oo ku saabsan roulette kale.
Waa hagaag dadyow, runti sidoo kale waxaan hayaa wax dheeraad ah oo aan ku daro, laakiin haddii mustaqbalka qof uu ku weydiisto macluumaad ku saabsan Parrondo Paradox ee lagu dabaqay Roulette, waad ogtahay meesha aad u hagaajinayso.
Sidoo kale xusuusnow kan aan halkaan ku soo bandhigay inuu yahay mid ka mid ah noocyada badan ee suurtogalka ah ee la abuuri karo iyo in, mahadnaqa jilista, aad iskudeyn karto naftaada; Ugu dambeyntiina, waxaan jeclaan lahaa in aan tilmaamo, haddii ay nasiib u yeelatay in ay qof ka baxsato, in ficil ahaan waxaa lagu ciyaaraa xitaa tiro!
Iyada oo barnaamijkan roulette-ka ah waxaan ku xiraynaa doodda mawduucan xiisaha leh, ama caanka Parrondo Paradox.
Waxa aan hadda kuu soo bandhigayo waa soo koobid qalab xisaabeed (maamulka lacagta) iyada oo ku saleysan cillad-xisaabeedkan xisaabeed, ee aan haddana ku sameeyay isbadalo yar yar oo aan gadaal ka sharixi doono.
Xarunta cusub ee ciyaaraha ee Roulette Paradox
Sidaan horeyba u soo sheegnay, waxaan ku sameeyay waxoogaa kala duwanaan ah nidaamka asalka ah, maxaa yeelay sida aan rajeynayo inay hadda u cadahay qof walba, dhibaatada dib-u-dhiska Parrondo paradox ee roulette waxay ku kooban tahay oo keliya suurtagal la'aanta haysashada qadaadiic ku guuleysata qiyaastii 70% ee Waqtiga iyo in kaliya 1 unug uu guuleysto ama laga badiyo, sida lacagta dhabta ah ay sameyso marka la ciyaarayo madaxyada ama dabo.
Si looga gudbo caqabadan, sida kaliya ayaa ah in la abuuro qadaadiic khiyaali ah (fursad) ah oo leh boqolleydaas sortie, laakiin haddii ay dhacdo in khasaaro ay keento dib u soo kabasho si dib loogu soo celiyo cutubkii lumay dib ugu soo celiyo diiwaanka lacagta in ka badan mid caadi ah lacag.
Lacagteenna '' rigged '' ee shaqadan marwalba waa lacagta Y, marka laga reebo inaan u maleynayay inaan adeegsaday isku-darka muujinta ka yar kan kor lagu sharraxay, taas oo markaa ka dhigaysa wajiga soo kabashada lagama maarmaanka ah iyo lama huraanka ah mid ka sii dhib yar.
Waxaan ku gartay qadaadiicdan qamaarka iyadoo hal xabad ah 2 hal dersin.
Sidan oo kale waxaan ku haysannaa qadaadiic khiyaali ah oo markay guuleysato (64,86% waqtiga), ay uruuriso hal cutub (tanina waa hagaagsan tahay) markay lumisona waxay lagama maarmaan u tahay soo kabashada kaliya hal unug (run ahaantii, 1 ayaa lumay , laakiin 2 waa waxa waayi doona shilimaad qadiimi ah, marka hal unug kaliya ayaa loo baahan yahay in lasoo celiyo).
Labada qadaadiic ee kale xaaladdu way ka dhib yar tahay, waxaan higsan doonnaa fursad fudud oo aan kala sooc lahayn oo aan u kala jeclaanno.
Waxaan ku dhex galineynaa 'Paradox Simulator' boqolleyda sortie ee seddexdan qadaadiic, taasi waa:
Qadaadiic X: 486 / 1.000 (Fursad fudud);
Qadaadiic Y: 648 / 1.000 (2 darsin ama 2 tiirar);
Qadaadiic Z: 486 / 1.000 (fursad fudud).
Markaa oo loo ekeysiiyo isbarbardhigga tiro badan oo wareegyo ah, waxaan marka hore xaqiijin doonnaa qashin aad u muhiim ah: dhalidda nidaamka maqnaanshaha farshaxanimada, taas oo qiyaastii ah 10%.
Muddo dheer ayaan qiimeynayay xulashada goobtaan, maxaa yeelay sida aad ka arki karto garaafkii hore, wax soo saar khiyaali ah + 10% ayaa xaqiiqdii inaga duwanaanaysa kala duwanaanshaha 'xad-dhaafka ah', taas oo ah dilaaga ugu xun isla marka canshuurta kadib, maxaa yeelay waa ka sarreeyaa. waa kala duwanaanshaha xun (oo waliba ku jira ciyaar leh EV togan) iyo ka sii weynaanta cadaadiska nafsaaniga ah ee ay tahay inaan ku qaadno marxaladaha xun ee ciyaarta.
Waxaa kufilan in la dhaho nidaamka xisaabta ku guuleysta ee Roi + 1% ama + 2%, wuxuu mari karaa wajiyo lacageed oo xun oo boqolaal boqolaal ah hadaanay kumanaan jeer garaacin kahor intaan lagu laaban wanaaga, dhamaanteen ma awoodi karnaa inaan iska caabino cadaadiska nafsiga ah?
Isticmaalka Roulette Paradox
Isticmaalka barnaamijka waa wax iska fudud, waxaad kubilaabeysaa inaad kuqariso hal cutub fursada fudud ee ku xusan sanduuqa hoose (BET ON MADOW shaxanka) iyo cusbooneysiinta sanduuqa lacagta, adoo riixaya badhanka dhinaca hadii ay dhacdo inaad guuleysato (jeeg cagaaran) ama lumis (iskutallaab cas).
Waqtigan xaadirka ah, kaliya dhagsii lacagta birta ah ee soo socota (Y / Z) iyada oo ku saleysan mid ka mid ah labada oo si otomaatig ah loo hawlgelin doono sidaas darteedna tilmaam fursadda ay tilmaamayso koronto-dhaliyeha aan rasmiga ahayn ee barnaamijka.
Halbeeg ahaan waa inaad sharad ku sameysaa qadarka lagu muujiyey sanduuqa jaallaha ah ee bidixda hoose (Bet Units), qadaadiicda X / Z tani waxay had iyo jeer la mid noqon doontaa 1 cutub (xitaa tiro), lacagta Y (laba darsin) waxay noqon doontaa lagama maarmaan in la sharaddo qaddarka la tilmaamay on darsin keli ah, sidaas darteed haddii '3' uu ka muuqdo sanduuqa jaalaha ah, waa in lagu sharaddeeyo 3 cutub dersinnada hore iyo 3 cutub dersinnada labaad, ama kuwa barnaamijku tilmaami doono.
Markaad tagto lacagta ugu dambeysa ee midigta (shanaad), waxaad ka bilaabaneysaa lacagta ugu horreysa ee X iyo wixii la mid ah.
Sameynta tijaabooyinka qaarkood ee joogitaanka dhabta ah ee hubaal waxaad ka heli doontaa shabaqa, waxaad arki doontaa in Paradox Cash ay had iyo jeer dhali doonto +1 ama -1, sida saxda ah ee horay loo sii sheegay ee Parrondo paradox, halka lacagta guud iyo tan Kalfadhigu ay socoto (Weerarka Hadda) haddii haa lagu khasaariyo qadaadiicda Y, waxay dhab ahaan dhalin doonaan -2 cutub (haddii sharaddu ahayd 1 unug halkii dersin).
Maaddaama qof kastaa xaqiijin karo mahadnaqa jilista, nidaam loo dejiyey qaabkan wuxuu abuurayaa roi khayaali ah + 10% waana tan xisaabta, Lacagta 'Paradox Cash' ee muddada dhexe / muddada dheer 'lama huraan' ayey la jaan qaadi doontaa qiimahan, laakiin looguma talagalin yaa garanaya sixirka, laakiin si fudud maxaa yeelay markuu ku lumo qadaadiic Y wuxuu kaliya dhali doonaa -1 halkii uu ka ahaan lahaa -2.
Hadafkeenu wuxuu noqon doonaa inaan dhaqaajinno maneuver si aan uga soo kabano unugyada dheeriga ah ee ka lumay lacagta Y.
Waxa ugu fudud ayaa ah in la ciyaaro 2 dersin horumar ah, oo leh sharad sii kordheysa 1/3/9/27/54 ... cutubyo halkii dersin ah, laakiin markaa waxaan ku dhici doonnaa daqiiqado yar gudahood tanina dhab ahaan ujeedkeenu ma ahan.
Sidaa darteed waxaan ku fikiray inaan ku ilaaliyo dib u soo kabashada qaabkan: ugu horreyntii haddii wax soo saarka khiyaaliga ah ee ka soo horjeedka Parrondo ee adeegsanaya 3 qadaadiic yahay 10%, dhab ahaantii waxaan isku dayi doonnaa inaan kala bar kalabar ka qaadanno bangiga, ama in ka badan 5% hufan ee Roi ee lacagta caddaanka ah ee Real, taas oo horeyba ganacsi u ahayd.
Haddii inta lagu gudajiro kal-fadhiga kaliya ee shilimaadka X / Z noogu fadilay dhanka kala-guulaysiga marka la barbardhigo kuwa la ciyaaray, cutubyadan dheeriga ah waxay u adeegi doonaan inay yareeyaan kobaca sharadka.
Tusaale ahaan, haddii 20 kabacdi aan haysto + 4 cutub oo lacag ah, waxay ka dhigan tahay inaan haysto 3 qaybood oo dheeri ah marka loo barbar dhigo 5% tallaalada la ciyaaray (runti waa inaan joogaa +1), waa hagaag, haddii xilligan oo kale aan waayo wareejin leh lacagta Y (oo celcelis ahaan ku guuleysata 2 jeer 3diiba), softiweerku isla markiiba kor uma qaadin saamiga soo kabashada, laakiin wuxuu ku sii jiraa halista 1 illaa iyo inta Roi ee qasnajiga dhabta ahi ugu dambeyn uu ka hooseeyo 5%.
Tani waxay ka dhigan tahay in tusaalaha kor ku xusan aan sii wadi karo mid kale oo 2 ah oo ku dhacaya Y iyada oo aan daruuri ahayn inaan sare u qaado sharadka.
Khiyaanada labaad ee lagu ilaalinayo saamiga hoose waxay ka kooban tahay xaqiiqda ah in maneuve ka soo kabashada loo dejiyay kaliya qadaadiicda Y, tani waxay ka caawineysaa maxaa yeelay inta jeer ee la filayo guuleysashada istaroog kasta waxay ku saabsan tahay 65%, aad uga sarreysa tan fursadaha kale ee la ciyaaray. Lacagta Z / da (48,6%) iyo waliba sidoo kale wejiyada taban ayaa sii yaraan doona, xitaa haddii luminta kiiskan ay tahay labanlaab, laakiin ma heli kartid wax walba!
Kujira sharadka leh Roulette Paradox
Qodobka seddexaad ee xakamaynta sharadku wuxuu ka kooban yahay xaqiiqda ah in haysashada lacagta Y ee suurtagalnimada 65%, taasi waa in la yiraahdo ku guuleysiga celcelis ahaan 2 oo ka mid ah 3 hits, barnaamijka ayaa isku dayi doona soo kabashada oo aan ku dhicin hal garaac, oo nagu qasbaya ku dhowaad martingale saddex laab ah, laakiin marwalba marwalba 2 garaac oo lagu qasi karo xad la'aan, natiijada la helay iyadoo had iyo jeer loo qeybiyo soo kabashada 2 isku day kasta.
Sidee loo xisaabiyaa soo kabashada? Si fudud maahan tirada unugyada lumay shilinka Y, laakiin waxay ku saabsan tahay 50% faraqa u dhexeeya Paradox iyo Real Cache.
Xaqiiqdii, haddii meel cayiman oo ka mid ah kal-fadhiga Lacag-bixiyaha 'Paradox Cashier' (oo aan xusuusinayo inaad ku duubi doonto 10% faa iidada istaroogyada la ciyaaray) wuxuu ku yaal + 6 iyo Lacag-hayaha dhabta ah wuxuu ku beddelayaa -4 sababo la xiriira cutubyada ka lumay Y qadaadiic, Recover waxaa loo dejin doonaa iyadoo loo qeybinayo 2 farqiga u dhexeeya +6 iyo -4, taasi waa 10 cutub, sidaas darteed saamiga kiiskan wuxuu noqon doonaa 5 unug halkii dersin.
Haddii ay dhacdo guusha tallaalka (oo aan xusuusanno inuu leeyahay heerka guusha ee 65%), dheelitirka cusub wuxuu noqon doonaa + 7 oo loo yaqaan 'Paradox Cashier' iyo '1 ee midka Real 'sidaas darteedna khamaarka soo kabashada cusub wuxuu la mid noqon doonaa 3 unug dersin.
Haddii ay dhacdo khasaaro, dhanka kale, Bangiga Royal wuxuu aadi doonaa -14 iyo Paradox ilaa + 5, marka sharadka soosocda ee qadaadiicda Y wuxuu u maleynayaa inuu noqon doono 10 unug halkii dersin taas oo, sida aad arki karto, ay tahay oo kaliya labanlaabmay oo aan labanlaabmin sida caadiga ah ay ku dhici lahayd soo kabashada oo labaatan darsin ah.
Intaas waxaa sii dheer: tan iyo qadaadiicda Y, marka loo eego qawaaniinta caadiga ah ee ka soo horjeedka Parrondo, waxaa la ciyaaraa oo keliya haddii waqtiga sharadka lacagta caddaanka ah aan loo qeybin karin 3 (xaaladdan, dhab ahaan, lacagta qadaadiicda 'Z' ayaa la ciyaaray), gaar ahaan markaan heerarka roi. si waafaqsan filashooyinka, waxaa dhici doonta in kala duwanaanta wanaagsan ee shilimaadka X / Z ay horseedi doonto dib u dhigista kicinta kororka sharadka, taas oo run ahaantii aan loo baahnayn haddii aan ku lumino xoogaa istaroog ah lacagta Y. laakiin roi wali wuu la socdaa yoolka + 5%.
In Roulette Paradox dhammaantood waa otomaatig, kaliya tilmaama waxa la tilmaamay halka lagu muujiyey oo dhagsii badhanka si aad u diiwaangeliso natiijada tallaalka (guuleystey / lumay).
Barnaamijku wuxuu sidoo kale soo bandhigayaa hawl lagu badbaadinayo xogta kal-fadhiga iyo garaaf lagu hubinayo horumarka Bangiga Real (badhamada dhinaca midigta sare).
Intaas waxaa sii dheer, illaa iyo inta roi% ee lacagta caddaanka ahi ay tahay 5% ama ka sarreyso, badhanka cagaaran (Target Roi) oo ay ku qoran tahay 5% biligleynaya, tani waxay noo muujineysaa inaan 'xasilloonno', maxaa yeelay badhanka cas (Next Bet on Qadaadiic Y) ayaa bedelkeeda calaamadeyn doonta inta aan ku khamaareyno qadaadiicda Y (qiimaha in had iyo jeer lagu dhufto 2, maadaama xaqiiqda ay tahay inaan ku khamaarno 2 darsin) iyo haddii sharadka la tilmaamay uu yahay tusaale ahaan 7 unug halkii dersin, laakiin si kasta oo ay tahay dhabta roi waa 5%, yaa nagu qasbaya inaan kor u qaadno sharadka? Kaliya dooro '1' sanduuqa jaalaha ah Cutubyada Sharadka hoosna u dhig qiimaha la soo jeediyey.
Xusuusnow: softiweerku 'wuu soo jeedinayaa', laakiin markaan shaki galno waxaan xor u nahay inaan go'aan ka gaarno iyadoo ku saleysan xaaladda dhabta ah ee diiwaanka lacagta.
Waxaan hadda u nimid su'aalaha caadiga ah: laakiin faa'iido noocee ah ayuu nidaamkan u leeyahay ciyaaryahanka? Immisa raasumaal ah ayey qaadataa? Ma u baahanahay inaan dalbado Stopwin ama Istoolajiyad fadhiyada?
Dhaqdhaqaaqa halkan lagu sharraxay ma keeni karo faa'iido xisaabeed ciyaaryahanka, sababtoo ah rajada laga qabo suurtagalnimada ku guuleysiga wareeg kasta oo la beddelay lama beddelo, waxa loo baahan yahay in la hubiyo waa qaybinta tuurista, taas oo nidaamkan umuuqata inuu ciqaabay rajada khiyaaliga ah ee ku-guuleysiga is-waafajinta (+ 10%).
Waqtiga aan qorayo maqaalkan waxaan ciyaaray ilaa 2.000 dhabarka dhabta ah (khadka tooska ah ee tooska ah ee tooska ah ee tooska loogu iibsado) waana inaan dhahaa weligey kamaan leexan qiimihii la filayay (5% dhabta ah) hadaanay la socon isbeddellada dhammaantood ku jira .
Waan ogahay in 2.000 wareega ay yar yihiin, hase yeeshe, sida tirakoobyadu saadaalinayaan, waxaan sidoo kale la kulmay 6/7 oo isku xigta oo lumis ah oo ku dhaca lacagta Y, taas oo dib u soo kabashada caadiga ah ee tooska ah ee 2 darsin ay soo saari laheyd lacag badan, halkii ugu sarreysay ee Waxay ahayd inaan sameeyo illaa iyo hadda waxay ahayd 30 unug halkii dersin (wadarta 60 cutub), waji kaas oo si kastaba ha ahaatee si dhakhso leh ugu soo laabtay si sax ah maxaa yeelay waxaan ku xasuusinayaa in tallaal kasta oo Y ay guuleysato celcelis ahaan 65% waqtiga.
Iyada oo ku saleysan tijaabooyinkeyga waxaan dhihi lahaa 400 cutub waa cadaalad.
Haddii, sida aan isku dayi doonno inaan xaqiijino, manaafacaadkani 'wuu jilciyaa' kala duwanaanshaha iyada oo aan iska dhigin inuu hoos u dhigayo sharciyada kiiska, raasumaal bilow ah oo ah 100 euro oo keliya ayaa ku filnaan lahaa, taas oo si sax ah ugu habboon 400 unug oo ah 0,25 senti.
Waa hagaag, tani waa wax walba, sida iska cad waxaan kugula talinayaa inaad had iyo jeer sameyso tijaabooyin fara badan oo leh joogitaanno badan oo dhab ah oo laga soo dejisan karo shabakadda ka hor inta aanad boqolkiiba hal dul dhigin roogga cagaaran (run ama muuqaal ah), isku daygu waa bilaash iyo wixii ka sarreeya waxaas oo dhan waxay kuu ogolaaneysaa inaad runti tijaabiso waxa aan filan karno inta lagu jiro ciyaarta dhabta ah marka la eego wejiyada taban iyo sharadka ugu sarreeya, sidoo kale waxba kama hor istaagayaan qof inuu ka fekero khiyaanooyinka qaarkood si loo hagaajiyo iska caabinta qaabkan xulashada si loo adeegsado caanka Kala duwanaanshaha Parrondo in roulette.
Soo Degso Fayl	RParadox.zip - 3 MB